Nei Kufurira Kwekushambadzira Kungangove Yako Inotevera Sarudzo | Martech Zone
Nei Influencer Kushambadzira Ingangove Yako Inotevera Strategic
Svondo, Kurume 29, 2015 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Pandakataura pamusoro kushambadzira kushambadzira paSocial Media Kushambadzira Nyika, ndakapeputswa nezvose kudiwa uye nhaurirano inoenderera mberi yandaive nayo nemakambani mazhinji mumusangano wese. Ini ndaive nekamuri rakazara uye chaiko ndaive neboka revanhu rainditevera kunze kwechiratidziro chemimwe mimwe mibvunzo mushure mechikamu.
Ndakagovana iyo rap vhidhiyo iyo Rappitt yakandiitira - iyo zvino yakasvika kune yakakura vateereri pasina kuda kundiripa semunhu anokurudzira nekuti akandinongedza uye akandiitira vhidhiyo. Ini ndataura nezvekuvandudza nyaya uye marongero ekuti ubudirire neanokurudzira uye nekubuda kana ivo vasiri kushanda kunze. Uye ini ndakapa imwe mhinduro pamusoro pekutaura nyaya izvo zvaizobatsira iye anokurudzira kutaura zviri nani nezvechigadzirwa kana sevhisi yaunoshuvira kuti vagovane.
Mhando dzakadai seInfluencer Kushambadzira nekuti inogona kushandira zvakasiyana siyana (pamusoro pechinangwa chiri pachena, kuwedzera kutengesa): peji renji, kuburitswa, kuvimbika kwevatengi, chizvarwa cheGC, kukura munzira dzezvemagariro, hutachiona hwemukati, nezvimwe. Vatengi vanozvifarira nekuti zvinosvika senge zvechokwadi. Uye inoiswa kwavari panguva yakakodzera. Kana mutengi achivhura bhurogu nezveshongedzo yemba… ndiyo nguva yakafanira yekuvapa nechisungo cheya sachigaro weEames (iro zita rako riripo parizvino), riine iro rinoratidzwa mukati mechimiro cheimba inovimbika yevanokurudzira. Iyi nzira yemamiriro inoshanda zvakanyanya kupfuura kuvatumira yavo spammy email chinhu chekutanga mangwanani… chaipo pavanenge vava kushanda.
Chinhu chakakosha chekutsvaga anopesvedzera hachisi kuvhiringidza pesvedzero nekusvika kana mukurumbira. Kutevera kukuru hakureve kuti vateereri kana nharaunda ichaenda kuzotenga chigadzirwa chako kana sevhisi. Muchokwadi, nepo vazhinji vanonzi vanokurudzira vane mukurumbira unoshamisa - izvo hazvireve kuti vanogona kukanganisa maitiro ekutenga evaya vanovatevera.
Zvakakosha kuti iwe uwane mumwe munhu ane vateereri vanoenderana uyo anokwanisa kwete kungosimudzira chigadzirwa chako kana sevhisi - asi kukwezva vateveri uye kuvatungamira kubhizinesi rako kwaunogona kuvashandura. Kufuridzira hakusi kutengesa, izwi rekuti simba rinobva pashoko chairo Runyura. Basa reanosimudzira ndere kutungamira kuyerera kwauri kuti ugone kushandisa kuvimba uye chiremera icho chinokurudzira chave chichivaka nekuchiwedzera seyako.
Shefu yakagadzira iyi infographic uye inesimba kushambadzira chikuva chekuziva nekubatana nevanokurudzira uye kuyera kubudirira kwemakanzuru anoitwa.
Tags: kushambadzira kushambadzirainfluencer kushambadzira zanopasherufu
StatDragon: Yakawedzera Ongororo yeVimeo